Basa rekupa: Mubatsiri (s) Treasurer - Afriland Chekutanga Bank Bank Cameroon - Tamban RELAY
By Chinde On Juil 15, 2020
Afriland Chekutanga Bhangi Cameroon iri kutsvaga 02 Treasurer Vabatsiri. Vakaiswa pasi pekutarisirwa neMusoro weDhipatimendi rePfuma, basa ravo guru nderekutengesa zvigadzirwa zvemapfuma kuitira kuti bhizimusi riwane purofiti uye purofiti.
Yakanakira mumiriri chimiro:
Bhengi reCameroonia rinoshuvira kunyorera pachinzvimbo ichi mukwikwidzi aine hushoma BAC + 5 kudzidziswa mune Zvemari / manejimendi / Bhizimusi / Ehupfumi. Uye zvakare, makore maviri ezviitiko anodikanwa kuita rimwe basa rakafanana kana rechimiro chemaneja wekambani. Uye zvakare, mumiriri anofanira kunge aine ruzivo rwekutarisira njodzi uye zvigadzirwa zvemari.
AFRILAND Kutanga Bangi CAMEROON ANOGONESA VANHU VANOGARA
Yakatongerwa mhosva yekunyepa muDRC, iyo Afriland group re ...
Afreximbank, iyo yekuAfrica yekutenga-kunze bhanga, iri kuita…
Chikumbiro chekupedzisira: Chikunguru 17, 2020
bvunza Afriland Chekutanga Bank basa rairo.
Senegal: La Somone dura rinotyisidzirwa neye hotera chirongwa
Nchout Ajara Njoya: "Ndingadai ndakasarudza UN inogona kutumirwa kumashure"
Tsvaga vanamukoti, mukoti mubatsiri kana IDE